Shiinaha Haining yanguan magaalada wakhtiga asalka ah sida dheer shirkad! warshad iyo saarayaasha | Chuan Yang
Magaalada yanguan Haining in sida waqti asalka dheer shirkad!
Read August 18 hir cajiib ah, dhadhan guowei Wang joogitaanka hore oo idinka mid ah, wax yar la damacsan in uu jiro dukaan waqti u sharrifnay Binii ah, ayaa sidoo kale ka this jawi taariikhda iyo dhaqanka ee magaalada qadiimiga ah - yanguan.
Marka aad walwalo ma oga meel ay aadaan si ay u iibsadaan fadhiga, yanguan dadka xiiso bari doonaa in aad "si chuan Yang ah, fadhiga chuan Yang muddo ka badan 30 sano, brand hore.
Isla mar ahaantaana, waxay si xiiso leh ku siin doonaa tilmaamo "oo ay la socdaan bari iyo galbeed waddo ayaa bari socday, arki saldhiga gaaska Dian Guo, chuan Yang guriga on lid ku ah saldhiga gaaska.
Isagoo ka hadlayay of qoyska chuan Yang, waxaan haining dadka deegaanka ku dhowaad dhammaan ogahay, sidoo kale waxaa lagu tirin karaa sida brand qoyska ~
"Markii aan iyo ninkeeda waxaan ugu horeysay guursaday, waxaan soo iibsaday fadhiga kawaio ee. Waxa uu ahaa in ka badan 10 sano. Hadda waxaan ku dayactiray our guriga iyo iibsaday fadhiga kawaio ee. "
Tallaabada galay albaabkii badda Sichuan, shaqaalaha waa mid aad u xamaasad leh, waxaad siin hordhac ah oo faahfaahsan, fadhiga salootada, sariirta, maqaar, farshaxanka dhar, xaabo adag, European ... Dhammaan noocyada kala duwan, ha aad la dhalaalayay ~
dabaqa koowaad waxaa fadhiga American, dabaqa koowaad waa fadhiga maqaar iyo maqaar sariir, iyo dabaqa labaad waa maro fadhiga.
Chuanyang qoyska maqaar taxane 611-25
Chuanyang qoyska maqaar taxane 611-25, fadhiga this laga sameeyey oo cawl biyaha, muujinayo debecsanaanta iyo xarrago ee fadhiga. isku dhafan ee 3 qof + naagtiisii ​​addoonta boqornimada habboon doorashada ee dhexdhexaad ah iyo qol fadhi yar, line waa mid kooban oo si fiican, iyada oo aan siyaado ah.
Chuan Yang dhar qoyska taxane 616-25
Chuan Yang maro qoyska tahay taxane 616-25, fadhiga this doorto cas khamri, u muuqataa xamaasad leh, kooban, barkin daabacaadda ogolaanaysaa fadhiga macsalaameeyo si monotonic, ku darayaa neef qorax dhalinyarada. Dooro suuf oo tayo sare leh iyo go'yaha linen, xulashada fadhiga laga sameeyey maro suuf ah oo tayo sare leh, xirtaan u adkaysta iyo wasakh ah, suuf iyo maro wax ku ool ah uu u nuugo dhididka karaa maqaarka aadanaha, caafimaadka deegaanka, methanol lahayn.
Haddii aad leedahay ilmo, sidoo kale waxaad aadi kartaa dabaqa saddexaad, waxaa jira dhammaan noocyada shidmaan carruurta oh! Waxaa sidoo kale jira shidmaan qoryo.
Pink, iyo buluug, wiil yar, gabadh yar oo ay leeyihiin ~ leeyihiin qaab ah in ilmahaagu jecel yahay?
Europe style nooca
Taga oo 4 dabaq mar waa Europe nooca Suite, balaadhan iyo alaabta xarrago leh, kulan la farshaxan jilicsan, waxay leeyihiin nooc ka mid ah oo barwaaqaysan, sare, dareen macaan ~
qoyska shisheeye Sichuan
Waxay ku taallaa on webiga qarkiisii ​​qiantang, Zhejiang alaabta chuanyang co., LTD., La aasaasay sannadkii 1986, ayaa 30 sano oo taariikhda horumarka, ku takhasusay cilmi-baarista iyo horumarinta, wax soo saarka iyo iibinta alaabta geed isbonji iyo alaabta jilicsan. Sannadkii 2006, waxaa la aasaasay Zhejiang chuanyang alaabta co., LTD., Taas oo uu noqday ganacsi weyn oo casri ah oo dhamaystiran qoyska keenidda design, wax soo saarka, iibka iyo adeegga. Shirkadda waxaa si rasmi ah oo ku qoran on board saddexaad cusub on May 11, 2016 la code stock of 837386 ah.
Location: no.12, wadada galbeedka huanyuan, park warshadaha guodian, magaalada yanguan (ka soo horjeedka saldhiga gaaska guodian)
Tirada Contact: 0573 - 87683850
waqti Post: Jul-19-2019
qeybaha kala fidsami Sofa , Qeybaha Fabric fidsami Sofa, 3 kursi fidsami Guddoomiyaha Sofa, Leather fidsami Guddoomiyaha Sofa ,